ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलाको कति ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २० भाद्र शुक्रबार १४:०८
ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
एजेन्सी, काठमाडौं। आज साताको छैठौँ दिन अर्थात शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ ह्वात्तै घटेको छ। आज सुन प्रतितोला १४ सयले घटेको हो । हिजो बिहिबार प्रतितोला ७३ हजार ४ सय रुपयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आज १४ सयले घटेर ७२ हजारमा कारोबार भइरहेको छ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको भाउ पनि घटेको छ। तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार
७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
आज सुनको भाउ घटेसँगै चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । हिजो बुधबार तितोला ९ सय ४० रुपैयाँ पुगेर उच्च रेकर्ड बनाएको चाँदीको भाउ आज ८९९ मा कारोबार भइरहेको छ ।
शेयर बजारमा मंगलबार परिसूचक नेप्से घट्यो
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर
PREVIOUS Previous post: आजको विनिमयदर : कुन देशको कति छ ?
NEXT Next post: धादिङमा ग्यास सिलिन्डर विष्फोट , ४ घर जलेर नष्ट